Ikhaya leHolide @ 1110 DonBosco Cross Road, Ernakulam
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguPaul F
Ise 1110 Don Bosco Cross Road, Vaduthala, 4 beds-3 queen & 1 single, (2 AC rooms), 2 lounges, balcony, dining, ikhitshi elisebenzayo, licocekile, likhuselekile, ikhaya labucala elinazo zonke izinto eziluncedo, ukuya kwiindwendwe ezisi-7. . Ipropathi yonke yokubhukisha enye. Ukungena ngokungenamthungo kunye nokuphuma, i-1.5 km ukusuka kumbindi wesixeko sase-Ernakulam kunye ne-20 km ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya. Indawo enye yokupaka iimoto ekhoyo.
Icocekile, ikhaya labucala, linefenitshala kwaye liyasebenza. Indawo ezolileyo, ekhuselekileyo nekhuselekileyo. Igcinwe kakuhle kakhulu ngabacoci abaqeqeshiweyo kunye nomkhathaleli. Ipropathi yonke yeyokusetyenziswa ziindwendwe kunye nokonwabela ukuphila njengekhaya labo. Inkxaso yomnakekeli ekhoyo kunye nenzuzo eyongezelelweyo. Inkxaso ekhethekileyo evela kumkhathaleli iqinisekisiwe.
4.41 · Izimvo eziyi-78
Uya kunandipha ukuthula, iqela, usapho okanye ukuhlala ishishini. Ukhetho lolosapho kunye namaqela. Usapho olungaphazamisekiyo, elonwabisayo kunye nexesha elimnandi eliqinisekisiweyo ngelixa uhlala kule ndawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Paul F
Umnini uhlala e-AUS kwaye ulawula ukubhukisha. Unxibelelwano olukhawulezileyo luqinisekisiwe. Umkhathaleli uhlala kwindlu elandelayo kwaye uqinisekisa uncedo, inkxaso kunye nesikhokelo esifunwa ziindwendwe ngokuhlala kwazo. Ude enze nenkonzo yemoto ehlawulelwayo xa ecelwe ziindwendwe ukuba zibonise idolophu kunye nezinye iinjongo zokubona.
Umnini uhlala e-AUS kwaye ulawula ukubhukisha. Unxibelelwano olukhawulezileyo luqinisekisiwe. Umkhathaleli uhlala kwindlu elandelayo kwaye uqinisekisa uncedo, inkxaso kunye nesikho…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ernakulam